बेलायतमा बोरिस जोन्सनको सरकार अल्पमतमा !
एजेन्सी– कन्जर्भेटिभ पार्टीका सांसद् फिलिप लीले लिबरल डेमोक्रेट्सको साथ छोडेपछि बेलायती सरकार अल्पमतमा परेको छ । उनको यो कदम निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ किनकी संसदमा प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र अन्य विपक्षीहरु इयुबाट बेलायत बाहिरिने विषय (ब्रेक्जिट)मा छलफल गर्दैछन् ।
ब्राकनेलका सांसद् डा. लीले हाउस अफ कमन्समा प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले आफ्नो धारणा राख्न लागेलगत्तै गएर प्रतिपक्षी बस्ने सिटमा बसेका थिए । उनले लिबरट डेमोक्रेट्सलाई छोड्नु भनेको अब प्रधानमन्त्री बोरिससँग बहुमत छैन ।
‘सरकारले ब्रेक्जिटलाई निकै बेवास्ता गरेको छ र यसले मानिसहरुको जीवनलाई समस्यामा पारेको छ,’ उनले भनेका छन् ।
बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनले ३१ अक्टोबरमा युरोपेली युनियन छोडिसक्ने बताएका छन् । ३१ अक्टोबरसम्म कुनै सम्झौता भए पनि नभए पनि उनले इयु छाड्ने बताएका हुन् ।
‘म खासमा एउटा सम्झौता तथा सर्तसहितको बर्हिगमन चाहन्छु,’ जोन्सनले भनेका छन्, ‘म सोमबार यसबारे छलफल गर्न डब्लिन जाँदैछु ।’